Maxaa Gurmad ah oo loo diyaariyay Qaxootiga ku go’doonsan Dalka Yemen?
Muqdisho (KON) -- Mashaariic Gurmad Bini'aadanimo iyo mid Walaaltinimo loogu aruurinaya Qaxootiga Soomaaliyeed ee ku xayiran Colaadda dalka Yemen, ayaa ka socda Muqdsho.
Dagaal Culus oo Maalintii Lixaad ka socdo Deegaano hoostaga Degmada Gurceel
Guriceel (KON) -- Dagaal ayaa Maalintii 6-aad ka socdo Deegaanno hoostaga Degmada Guriceel, ee Gobolka Galgaduud kaasi oo u dhaxeeya Ciidan lagu magacaabo Liyuu Booliis & Maleeshiyo Beeleed Deegaanka ah.
Xaliimo Yarey: Galgaduud & Mudug ayuu ka kooban yahay Maamulka aan dhiseyno
Cadaado (KON) -- Xaliimo Yarey, Gudoomiyaha Gudiga Farsamada Maamul u sameynta Gobolada Dhexe ayaa meesha ka saartay Wararka sheegaya in Koonfurta Mudug & Galgaduud loo dhisayo Maamulka.
Caalin: Shacabka Gobolada Dhexe haka fiirsadaa Qofka ay Hogaanka u dhiibanayaan
Cadaado (KON) -- Maxamed Axmed Caalin, Madaxweynihii hore ee Galmudug ayaa ugu baaqay Shacabka Gobolada Galgaduud & Mudug inay si aad ah uga fiirsadaan Qofka ay u dooranayaan Hogaanka Maamulka la dhisayo.
Wajiga 2-aad ee Shirka Cadaado oo furmaya
Cadaado (KON) -- Waxaa Maanta oo Axad ah la filayaa inuu si rasmi ah uga furmo Magaalada Cadaado Wajiga 2-aad ee Shirka Maamul u sameynta Gobolada Galgaduud & Mudug.
Khilaafka Shariif Xasan & Axmed Madoobe oo Cirka isku shareeray - Warbixin
Baydhobo (KON) -- Waxaa marba marka kasii danbaysa sii xoogeysanaya, oo Cirka isku sii shareeraya Khilaafka u dhaxeeya Horjoogiyaasha Shariif Xasan Sheekh Aadan & Axmed Madoobe.
Ciidanka Ethiopia oo wali Xasuuq Shacab kawada Gobolka Galgaduud
Guriceel (KON) -- Waxaa sii kordhaya Khasaaraha ka dhashay Dagaallo soo noq-noqday, oo u dhaxeeya Ciidanka Liyuu Booliis ee Ethiopia & Maleeshiyo Beeled Deegaanka.